China Bolsas De Regalo ကုန်စုံအိတ်ပါ ၀ င်သည့်အိတ်အရောင်ချည်ချည်ကာပတ္တာသုတ်ဆေးအိတ် Solid Color Block Totebag Pastel ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Zhihongda
Bolsas De Regalo ကုန်စုံအိတ်ပါ ၀ င်သည့်အိတ်အရောင်ချည်ပတ္တူစလွယ်အိတ် Solid Color Block Totebag Pastel
သင်၏စူပါအရည်အသွေးကောင်း၊ ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု” ဟူသောသင်၏နိယာမကိုစွဲကိုင်ထားပြီး Eco Tote Bag အတွက်ထုတ်လုပ်သူအတွက်သင့်အတွက်စိတ်ချရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်ဖြစ်လာစေရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားပွင့်လင်းသည်။ ကျနော်တို့ရပ်တန့်ဖို့ရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ရေရှည်တည်မြဲရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်။
Eco Tote Bag ၏ထုတ်လုပ်သူ၊ ပညာတတ်၊ ဆန်းသစ်။ တက်ကြွသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုတေသန၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ နည်းစနစ်အသစ်များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်နေရုံသာမက ဦး ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုဂရုပြုနားထောင်ပြီးချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဂရုတစိုက်ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်ချက်ချင်းခံစားရလိမ့်မည်။
၁။ အဆင်ပြေသော Carryall - ဤလွင်ပြင်ချည်မျှင်နှင့်တူသောအလောင်းအစားသည်ကုန်စုံဆိုင်များ၊ စာအုပ်များနှင့်အခြားအရာများကိုသယ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အစုံတစ်ခုစီတွင်အလုပ်ခွင်၌ဖြစ်စေကျောင်းတွင်အဆင်ပြေစေရန်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အထည်အိတ် ၅ လုံးပါ ၀ င်သည်။
၂။ ECO - FRIENDLY - နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်ဘက်စုံသုံး။ ရေရှည်တည်တံ့သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောဤဂေဟစနစ်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောအိတ်များကိုထပ်ခါတလဲလဲ သုံး၍ သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာခြေရာကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။
၃။ LIGHTWEIGHT ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှု - နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
၄။ Blank CANVAS - ပြန်လည်သုံးနိုင်သောဝါဂွမ်းစက္ကူများ၏အနက်ရောင်အနက်ရောင်သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးနောက်ခံဖြစ်သည်။ မြှင့်တင်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တုတ်အိတ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါသို့မဟုတ်ကလေးများကသူတို့၏အနုပညာလက်ရာများကိုပြသပါ။
၅. လွယ်ကူစွာဂရုစိုက်ပါ - ၁၀၀% သဘာဝချည်မှပြုလုပ်ထားသောဤထည်ကုန်စုံအိတ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ ရိုးရှင်းစွာစက်အ ၀ တ်လျှော်ပြီးနောက်သင်၏ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အထည်အိတ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ခြောက်သွေ့အောင်ဆွဲထားပါ။
ပစ္စည်းအမည် Bolsas De Regalo ကုန်စုံအိတ်ပါ ၀ င်သည့်အိတ်အရောင်ချည်ပတ္တူစလွယ်အိတ် Solid Color Block Totebag Pastel
နမူနာ ၁) ။ နမူနာအချိန်: 3-5 days.2 အတွင်းမှာပဲ) ။ နမူနာတာဝန်ခံ: ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အရသိရသည်။
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း ကြိုတင် T / T ဖြင့်ကြိုတင်ငွေ ၃၀%၊ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ T / T မှ ၇၀% လက်ကျန်ငွေ ၊L / C၊ D / A, D / P၊ Western Union, Paypal, Visa, Debit Card, Credit Card
ရှေ့သို့ Bolsas De Regalo ကုန်သေတ္တာအိတ်အားစိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောလိုဂိုနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အရောင်စုံချည်မျှင်များ Canvas တုတ်အိတ်များ
နောက်တစ်ခု: လက်ကားခရစ်စမတ်အ diy ပန်းချီပန်းချီကားအိတ်ကလေးကလေးများလက်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသော Graffiti Bag ခရစ္စမတ်ချည်ထည်အိတ်အိတ်စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ပါ
ရောင်စုံ Canvas တုတ်အိတ်များ
ရောင်စုံဝါဂွမ်း canbas အိတ်
Long Handle ကုန်စုံအိတ်
လက္ကား Eco-friendly နှင့်ချည်တုတ်အိတ်ချွတ်ထားသော Cu ...
စက်ရုံအဆင့်အလိုက် degradable လုပ်ထားသောအော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်း ...
Plain ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောဝါဂွမ်းကုန်စုံစျေးဝယ်အိတ် ...
စျေးပေါသော ၁၀၀% ချည်ပတ္တူစျေးဝယ်အိတ် ...